ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - BASILE MACHINE TOOL
ခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်အမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးသည်မော်တော်ကား၊ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အိမ်သုံးပစ္စည်းများကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးသောနယ်ပယ်အမျိုးမျိုးတွင်နေရာအနှံ့တွင်အလုပ်များခဲ့သည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံလူတို့သည်သင်မည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်ပြုလုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်အားမေးမြန်းလိမ့်မည်။ မင်းရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုငါတို့ဘဝမှာတွေ့နိုင်မလား။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်၊ ကားများ၏အသုံးချမှုသည်အကျွမ်းတဝင်မရှိသောနယ်ပယ်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကားမောင်းသည်။ သို့သော် CNC Machining နှင့် Sheet Metal မှကားအစိတ်အပိုင်းများထောင်ပေါင်းများစွာသောကားအစိတ်အပိုင်းများရှိသည်ဆိုသောကားဘောင်၊ စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည့်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဝက်အူတစ်ခုပင်မလုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါတို့လုပ်နေကြတာပဲ
Basile Machine Tool (Dalian) Co. , Ltd. (BMT) ကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်ရှင်းလင်းသောရူပါရုံဖြင့်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည် - CNC Precision Machining Parts, Sheet Metal နှင့် Stamping Parts ။ စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ရေနံ၊ စွမ်းအင်၊ လေကြောင်း၊ Aerospace အပါအ ၀ င်စက်မှုလုပ်ငန်းများစွာအတွက်တိကျမှန်ကန်သောစက်အစိတ်အပိုင်းများကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ဂျပန်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အီတလီအကြီးတန်းအင်ဂျင်နီယာတို့၏လမ်းညွှန်မှုနှင့်ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသော CNC စက်ပစ္စည်းများနှင့်စာရွက်သတ္တုနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းအစိတ်အပိုင်းများကိုအပြည့်အ ၀ ထောက်ပံ့ပေးသည်ကိုယုံကြည်ပါသည်။
BMT သည်သင်၏လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနိုင်သောထုတ်လုပ်မှုပြProbleနာများကိုဖြေရှင်းရန်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက်စီးပွားရေးအတွက်ဖြစ်သည်။ BMT မှထုတ်လုပ်သောအဖြေသည် CNC စက်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်စာရွက်သတ္တုနှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းအစိတ်အပိုင်းများ။ ကျွန်ုပ်တို့အတူတကွကျွန်ုပ်တို့သည်ဒီဇိုင်း၊ ဦး ဆောင်အချိန်နှင့်ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းများ၏ပင်လယ်ရေကြောင်းကိုဖြတ်သန်းပြီးသင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလျင်မြန်စွာပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်သလဲ။ အဖြေကတော်တော်လေးရိုးရှင်းပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်ဂရုစိုက်သည်.
နှစ်များတစ်လျှောက် BMT သည်လူကြိုက်များသောတိကျမှန်ကန်သောစက်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်လာပြီး CNC စက်များအစု ၄၀ ကျော်၊ CNC စက်များ၊ CNC စက်စင်တာ၊ ခုံစက်၊ WEDM၊ ကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့်တူးစက်၊ ဖြတ်စက်၊ Panasonic ဂဟေဆော်စက်များစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ။
တက်လာသည့်မျှော်မှန်းချက်နှင့်အညီအသက်ရှင်ရန် BMT သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစ၍ အီတလီကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် ပူးပေါင်း၍ Machine Tool Clamps (Utility Model Patent No .: ZL 2019 2042 3661.3) ကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
ယနေ့ BMT ၏စက်အစိတ်အပိုင်းများကိုကမ္ဘာအနှံ့ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ Toyota၊ BMW၊ Toshiba, Mori Seiki စသည့်ကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်ကုမ္ပဏီများအတွက်စက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုလုပ်ဆောင်သည်။
အဘယ်ကြောင့် BMT နှင့်အတူပါတနာ?
BMT ဘာလုပ်နိုင်ပါသလဲ။ BMT သည်သင်၏နာကျင်မှုကိုဖယ်ရှားရန်တည်ရှိသည်။ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုအဆင့်တိုင်းနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်တိုင်းမှသင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဖြစ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၌ရှိသည်။ မင်းသာလျှင်ငါတို့ကိုယုံဖို့လိုတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူလုပ်ကိုင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်၊ တုန့်ပြန်လျင်မြန်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ထိတွေ့မှုတွင်တိုးတက်မှုရှိသည်။ သင်၏အရည်အသွေးမြင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုလျင်မြန်စွာနှင့်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးဖြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်သင်၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ကိုပရမ်းပတာများမှတစ်ဆင့်လမ်းညွှန်လိမ့်မည်။
အဘယ်ကြောင့် BMT နှင့်အတူမိတ်ဖက်? ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတို့လူတွေဟာထူးခြားမှုကိုဖြစ်စေတယ်။ သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်စိတ်အားထက်သန်သောကျွမ်းကျင်သူများထံမှထူးခြားသော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများကိုကျွန်ုပ်တို့ပေါင်းစပ်ထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သက်သေထင်ရှားသောအရည်အချင်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သောသဘောထား၊ ဦး ဆောင်သောလက်မှုလက်ရာနှင့်အရည်အသွေးရှိသော ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ဖောက်သည်များနှင့်ရေရှည်အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတည်ဆောက်ရန်မျှော်လင့်နေပါသည်။ သင်ကအတိအကျ ဦး ဆောင်သောအရည်အသွေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့်တိကျသောသတ္တုစက်ထုတ်လုပ်သူကိုရှာဖွေနေပါက BMT သည်သင်၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။
သင်ကအတိအကျ ဦး ဆောင်သောအရည်အသွေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့်တိကျသောသတ္တုစက်ထုတ်လုပ်သူကိုရှာဖွေနေပါက BMT သည်သင်၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။
သံမဏိ CNC စက်အစိတ်အပိုင်းများ, တိကျသောစက်အစိတ်အပိုင်းများ, စိတ်ကြိုက် CNC စက်ဝန်ဆောင်မှု, စက်အသေးစားအစိတ်အပိုင်းများစက်, တိကျသောစက်ကိရိယာ, လူမီနီယံစိတ်ကြိုက် CNC စက်အစိတ်အပိုင်းများ,